Koety: Mpisera Twitter Nosamborina Ary Noafahana Noho ny “Fanebahany” Ny Emira · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Novambra 2011 16:56 GMT
Efa-bolana lasa izay, nosamborin'ny polisim-panjakana ny mpisera Twitter roa sy mpisera YouTube. Tamin'ny Alakamisy 3 Novembra 2011, mpisera Twitter roa no nampanantsoina ary notazonin'ny mpampanoa lalàna noho ny fandikana ny andininy faha-54 amin'ny Lalampanorenana Koesiana izay mametraka fa: “Ny Emira no Filohan'ny Fanjakana. Tsy azo kitihina sy tsikeraina ny tenany.”
Tao anatin'ny 24 ora, noafahana i Hamad AlOlayan (@hamadalolayan) sy i Tariq Al-mutairi (@al_tariq2009). Nefa mbola hitohy ny fanadihadiana.
Nilaza ny tsy maha-ara-dalàna ny fombafomba natao ny mpamaham-bolongana Koesiana Khamis Almutairi (@KhamisAlmutairi) [ar]:
@KhamisAlmutairi: Ny olana tsy tamin'ny nanadihadiana an'i Hamad AlOlayan, ny olana dia ny nitazonana azy. Tsy nanompa [ny emira] mivantana i Hamad ary mbola azo iadian-kevitra ny zavatra nosoratany, ka nahoana no nasiana io fitazonana tsy ara-dalàna io?
@KhamisAlmutairi: Nohadihadiana sy notazonina i Hamad AlOlayan nefa i Sabah Al-Mohammed [fianakavian'ny mpanjaka] izay voampanga ho nanompa parlemantera dia noafahana ka nandany ny androny ivelan'ny fonja mandra-piandry ny didim-pitsarana! Tsy rariny!
Misiokantsera ny tsikerany ihany koa ny mpikatroka politika Jassim Al-Qames (@JassimQ) [ar]:
@JassimQ: Tsy maintsy mahazo aho fa misy ny lalàna ka raha misy ny mandika izany dia hofotorana izy, saingy tokony ao anatin'ny fanajana ny zon'olombelona izany ary tsy tokony ampihorohoroana na karakaraina ho “vongan-kena”… indrindra moa fa tsy manana vatana mampatahotra izy!
@JassimQ: Zazabe ihany ny fieritreretana fa azo sakanana ny hevitra, manao izay hampatanjaka ilay olona fotsiny ianao. Indrisy, raha tokony hametraka tsara ny politika isika, dia toa ilaozantsika misambotra izay mitsikera, na inona na inona hevitr'izy ireo.
Mpamaha bolongana Shurouq Muzaffar (@ShurouqM) naneho hevitra mikasika ny fisamborana hafa indray ka nilaza hoe:
@ShurouqM: Tsy mbola nahazo fahalalahana izay heverin'ny sasany tokony ho azony i Koety. Efa taloha ny làlana “mena” ary efa taloha be indrindra ihany koa ny fomba fanao mamitapitaka.
@ShurouqM: Tsy ireo manampahefana ihany no tsy manam-panantenana marina amin'ny fahafahana, fa ny vahoaka ihany koa ka izany indrindra no antony mahatonga antsika amin'izao toerana izao.
Mpikatroka sady mpamaha bolongana Dhari Al-Jutaili (@Dhari_) niampanga ny fisamborana ihany koa:
@Dhari_: Manohitra ny resabe mikasika ny zava-mitranga aho sy ny fikasana hanisy olana amin'izany. Manohitra ny fitazonana tsy ara-dalàna ny olona tsy manohintohina ny fiaraha-monina aho. Ampy ny tsy famelana azy ireo handeha any an-tany hafa.
Mpisolo vava Bassam Alasousi (@Bassam_Alasousi) nitsikera ny fihetsiketsehana vitsy olona niseho teo anoloan'ny tranon'ny praiminisitra ho fanoherana ny fitazonana ireo mpisera Twitter roa:
@Bassam_Alasousi: Fanotaniana: nifototra tamin'ny fanapahan-kevitry ny mpampanoa lalàna ny fisamborana taorian'ny fitarainana napetraky ny Lapan'i Emira… araka izany, inona no azon'ny [Praiministra] Nasser Al-Mohammed atao amin'izany ho anao mba tsy hanao fihetsiketsehana eo anoloan'ny tranony?
Tetsy andaniny, mpanao gazety Mohammad Al-Baghli (@albaghli74) nitsikera ny fandraisan'ireo antenimiera anjara tamin'ny sit-in manohana ny fanafahana ny mpisera Twitter:
@albaghli74: Raha ilaozana mandany andro mandray anjara amin'ny sit-in, tokony hiasa mba hamoaka lalàna momba ny fahafahana mamoaka hevitra amin'ny Aterineto ny parlemanta ho fiarovana ny tsirairay manoloana ny tsy rariny ataon'ny manam-pahefana misahana ny fandriampahalemana.
Nandritra izany, Haya Alshatti (@hayaalshatti) te-hahalala betsaka mikasika ity toe-draharaha ity:
@hayaalshatti: Ilaintsika ny WikiLeaks ankehitriny! Te-hahita izay nosoratan'ny Ambasady Etazonia ho an'i [Washington] DC aho mikasika ny fisamborana mpisera twitter ao Koety!
Mpisera Twitter Saudi-Kuwaiti (@AwthahAbs) nanamarika ny tanjaka misy amin'ny Twitter [ar]:
@AwthahAbs: Ny fanangadrana mpisera Twitter sy ny fiantsona azy ireo atao famotorana dia manamarina fa fantatry ny manampahefana ny tanjaka ananan'ny Twitter sy ny fiovana mety ho entiny.
Taorian'ny namoahana an'i Hamad AlOlayan, mpikatroka Khaled Alfedala (@Alfadala) izay nogadraina ihany koa raha nitory azy ny Praiminisitra tamin'ny herintaona, nanolo-kevitra ny amin'ny tokony atao noho ny fahafahana ilay mpisera Twitter:
@Alfadala: Dokambarotry ny tanora mba hahatonga ny kaontin'i Hamad AlOlayan hahatratra mpanaraka 10,000.